एमालेमा बन्यो कार्यदल, को-को छन् कार्यदलमा, के हो कार्यदल भूमिका ? — Imandarmedia.com
११० बुँदे जान्दिनँ, ओलीलाई मान्दिनँ’- एमाले नेता नेपाल
एमालेमा बन्यो कार्यदल, को-को छन् कार्यदलमा, के हो कार्यदल भूमिका ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता सकिएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार दिउँसो ओली र नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता’ भएको हो।
२ नेताले वार्ताका क्रममा एउटा कार्यदल बनाएका छन् भने उक्त कार्यदलमा दुबै पक्षका ५/५ नेता राख्ने सहमति गरेका छन् । वार्ता टोलीमा ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका छन् भने नेपाल समूहबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको वान टु वान वार्ताले दुबै तर्फबाट ५–५ जना रहने गरी वार्ता टोली बनाउने सहमति जुटेको हो ।
गत शुक्रबार दुवैतर्फका नेतासहित छलफल गरेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले आज त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै वार्ता टोलीको टुंगो लगाएका हुन् । गत शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा जेठ २ लाई आधार बनाएर पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । यता एमालेको विवाद समाधान उन्मुख रहेका बेला बागमती प्रदेशमा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको भिडन्त रोचक मोडमा पुगेको छ ।
१० बुँदे जान्दिनँ, ओलीलाई मान्दिनँ’- एमाले नेता नेपाल